Maalinta: Juun 28, 2019
Varsak Gaadiidka Wareegga Wareegga Wareegga Waddanka oo la furo dhamaadka July
Duqa magaalada Antalya Metropolitan Muhittin Böcek 3. Mawqifku wuxuu eegay shaqooyinka socda ee Qadka Nidaamka Tareenka. 31 Varsak-Otogar ayaa la furay ka hor doorashooyinka March, iyo qandaraaslaha [More ...]
Darawaliinta Diirada! Diyaargarowga New Traffic ee Mevlana Junction in Izmit
Degmada Kocaeli oo ku taal magaalada caasimadda ayaa dhisi doonta gegis hoosteeda ah halka khadka tareenku uu u gudbin karo Ismit Mevlana Junction si uu khadka tareenku u gaarsiiyo degaanka Kuruçeşme. Marka la eego macnaha guud, qorshaha taraafikada ee hawlaha laga fulin doono gobalka dhammaadka wiigga [More ...]
Inkasta oo la furay bishii March ee sanadkii hore ku dhawaaqday dhismaha ku dhamaaday ee Konya High Speed ​​Tareen (YHT) Station, Turkey Grand National Assembly (Baarlamaanka) in ajandaha yimid. Xisbiga Dhaqdhaqaaqa Qaranka (MHP) [More ...]
Turkey waa laydinka furi doonaa si ay hawsha isbitaalka magaalada, taas oo xnumx'unc by Bursa 10 hab fudud si ay u gaaraan muwaadiniinta si ay u Hospital City UKOME la go'aamiyay in la dhiso line bas cusub. Guud ahaan, dhalashada haweenka, [More ...]
IMM-Inter Dragon Boat Festival Dareenka Farshaxanka ee Maltepe Coast
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa soo qaban qaabisay Bandhig Faneedka Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, kaasoo ah mid ka mid ah ururada isboortiga ugu waaweyn ee ka qeyb gala, isbuucaan. Boqolaal ka tirsan waaxaha gaarka loo leeyahay ee xafladda lagu qabanayo IMM Orhangazi City Park [More ...]
Kemeralti Xiritaanka Gaadiidka Gaadiidka ee Mashruuca Maareynta Socodka
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay go aansatay inay kordhiso waqtiga xayiraadda ee la keenay imaatinka gaadhiga sababtuna tahay xilliga xagaaga si loogu suurtogaliyo dadka lugaynaya inay ka dukaameystaan ​​jawi nabdoon oo Kemeraltı ayna yareyso wasakhowga hawada. [More ...]
RayHaber Annaga oo ah qoyska 7, waxaan sanado badan siinaynay adeeg aan kala go 'lahayn waxaanan ka shaqeynaynay 25 nidaamyada gaadiidka magaalooyinka iyo is dhexgalka. 4 ayaa loo soo bandhigay Tunç Soyer, Duqa Magaalada İzmir Metropolitan Dowlada Hoose. [More ...]
Jidadka Tareenka ee soo saaray KARDEMİR ayaa lagu soo bandhigay TÜDEMSAŞ
Jidadka Tareenka ee soo saarey KARDEMİR AŞ ayaa bilaabay in lagu soo bandhigo warshad TUDEMSAŞ Sivas oo ka mahadcelisay maamulka TUDOMSS taageerada ay u fidisay iskaashigeenna qaran iyo dadaalka horumarinta sheybaarka iyo sidoo kale TÜLOMSAŞ Eskişehir [More ...]
Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, oo leh dhaqaale suuqa xorta ah, waa suuqa soo koraya. Iskudhufinta Jamhuuriyadda Afrikada waxay ku noqotay dhaqaalaha caalamka ee lagu qabtay 1994 iyadoo loo marayo dimoqraadiyadda. Aagga waa 1.219.090 km2, dadku waxay ku saabsan yihiin 57,7 million [More ...]
Ururka Shaqaalaha Gargaarka Tareenka (YOLDER) wuxuu kaqeybqaatay Workshop Qandaraaska Wadajir ah oo uu abaabulay Sarkaalka Gaadiidka-Xarunta Guurtida ka hor inta aan 2020-2021-Heshiiska Wadahadalka Wadajir ah. Sarkaalka Gaadiidka-Sen General [More ...]
Gaadiidka jidka Altinbeşik Made Easy
Antalya Dawlada Hoose ee Magaalada Altinbesik Cave shaqada waddo-gooynta wadada ayaa la soo gabagabeeyey. Turkey ee adeegyada dhulka ugu weyn by furitaanka jidka keliya taasoo keentay in ay godod dhulka hoostiisa, kaliya helay gaadiidka fudud. Degmada Weyn ee İbradı [More ...]